Iindaba-Amandla aphezulu kunye nobukrelekrele sisitshixo sokwaphula imfumba yokutshaja
Amandla aphezulu kunye nobukrelekrele sisitshixo sokwaphula imfumba yokutshaja
Kule mihla, izithuthi zamandla amatsha ziye zaba lukhetho lwabathengi abaninzi nangakumbi. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba njengezona ndawo zibaluleke kakhulu zokuxhasa izithuthi zamandla amatsha, ukutshaja iimfumba zijongane nexesha lokutshaja ixesha elide, umthamo wenkonzo yokutshaja ongonelanga, kunye nenqanaba eliphantsi lobukrelekrele. Kunokuthiwa ukubiza imfumba zezona zinto zibalulekileyo ezithintela uphuhliso olukhulu lwezithuthi zamandla ezintsha.
Ke ngoko, indlela yokusombulula ingxaki yokutshaja iyeyona nto iphambili kulo lonke ishishini. Abanye ngaphakathi bakholelwa ukuba itekhnoloji yokutshaja amandla aphezulu sisitshixo sokwaphula imfumba yokutshaja kwixa elizayo. Kule nkalo, iinkampani zangaphandle zinangaphambili. I-Swiss ABB isungule i-Terra High Power DC yokutshaja ngokukhawuleza, enokuvelisa i-350 KW, ephantse iphindaphindwe kathathu kule mfumba yeTesla yokutshaja kakhulu. Ukongeza, isikhululo sokuqala sokutshaja ngokukhawuleza kwe-European Fast Charge Alliance Ionity senziwe sasebenza. Imfumba yokutshaja ihlawuliswa yinkqubo yokutshaja edibeneyo, kwaye amandla okutshaja aya kuthi ga kwi-350 KW, enokugcina ngokufanelekileyo ixesha lokutshaja.
I-ABBTerra ePhakamileyo yamandla e-DC yokutshaja ngokukhawuleza
E-China, leliphi inqanaba lobuchwephesha bokutshaja amandla aphuculweyo? Zeziphi izisombululo zokutshaja ezikhoyo? Yiya kulo mboniso kwaye uyazi! NgoJuni 15-17, i-11th Shenzhen International Charging Station (Pile) iMiboniso yezixhobo zobuGcisa iza kubanjelwa e-Shenzhen Convention and Exhibition Centre. I-Youyou Green Energy, i-Yingke Rui, i-Yingfeiyuan, i-Koshida, i-Polar Charger, i-Orange phantse iinkampani ezingama-200, ezinje nge-Electric New Energy kunye ne-Shenzhen Jiangji, izakubonisa izisombululo ezahlukeneyo zokutshaja kwizikhululo zebhasi kunye neetekhnoloji ezintsha kunye neemveliso zokutshaja amandla amakhulu.
Phakathi kweenkampani ezininzi ezithatha inxaxheba kulo mboniso, zeziphi iimveliso ezintsha eziza kuziswa yiShenzhen Youyou Green Energy Electric Co, Ltd. (ebizwa ngokuba yi "Youyou Green Energy")? Kuyaqondakala ukuba u-Youyou Green uzakubonisa uthotho lwee-voltage zamandla ombane ojikelezayo, uthotho lwe-State Grid rhoqo yokutshaja imodyuli kunye ne-30KW eyomeleleyo yemodyuli yokutshaja.
U-Youyou Green unokuba luphawu oluphambili kushishino lwemodyuli yokutshaja. NgoJuni 2017, u-Youyou Green wayengowokuqala ukwenza uxinano lwe-30KW yemodyuli yokutshaja. Emva konyaka omnye kweteknoloji entsha, u-Youyou Green usungule uluhlu lwamandla ombane wamandla ombane wamva nje. Phakathi kwabo, amandla ombane we-30KW ombane wamandla ombane wamandla e-UR100030-SW abonakala ngakumbi. I-UR100030-SW ifezekisa amandla ombane we-200-1000V, kwaye inokuvelisa i-1000V / 30A kumbane ombane ophezulu kunye ne-300V / 100A kumbane ombane ophantsi, ifezekisa ukuphuma kwamandla okungama-30KW kuluhlu olubanzi lwevolthi. Imfumba yokutshaja eyenziwe yimodyuli inokuvelisa ukutshaja okukhulu ngoku phantsi kwemeko yombane, kunciphisa kakhulu ixesha lokutshaja, ukuphucula ukusebenza ngokusebenza kunye nokunciphisa iindleko zokusebenza.
Okwangoku, u-Youyou Green unoluhlu lwemveliso olugqithisileyo kwicandelo lokutshaja iimodyuli zamandla emfumba, kubandakanya: uthotho lwe-30KW, uthotho lwe-20KW, uthotho lwe-15KW, uthotho lwamandla egridi yesizwe kunye noluhlu lwamandla ombane olubanzi. Ngophando lobugcisa olomeleleyo nokomelela kophuhliso, umgangatho wemveliso ogqwesileyo, imowudi yolawulo olucwangcisiweyo kunye nophando oluzimeleyo kunye nezibonelelo zophuhliso, inkampani iye yaziwa ngokubanzi ngabathengi. Ukuthembeka okuphezulu kwemveliso yemodyuli ye-Youyou Green Energy yaziwa kakuhle, engenakwahlulwa ngumoya wayo owodwa kunye nokusukelwa kokugqibela.
Ukongeza ukutshaja ngamandla amakhulu, ubukrelekrele ikwasisihluthulelo sokuphula imfumba yokutshaja. Okwangoku, izixeko ezininzi zakha iimfumba zokutshaja smart. Ezi ziqwenga zokutshaja zidibanisa ukutshaja, ulawulo, unxibelelwano lwamafu kunye nemisebenzi yokuhlawula. Emva kokuba umsebenzisi engenile kwinkqubo yokutshaja, inokuhlawuliswa ngokuswayipha okanye ukuskena ikhowudi ukuze ithathe amandla. Xa ukugcwaliswa kugqityiwe, umbane ucinyiwe ngokuzenzekelayo ukuthintela umlilo obangelwe kukugqithisa. Ukuhlawula nge-WeChat okanye i-Alipay khowudi yokukhangela, akukho mfuneko yokutshintsha imali kwaphela.
Ezinye iingcali zeshishini zikholelwa ekubeni ukukhula okwangoku kweemfumba zokutshaja kuzinzile, ukubiza amandla amakhulu, ukutshaja ngaphandle kwamacingo kuya kuba sisikhokelo esiphambili seshishini.